Zvinoparadza: Nicaragua Tourism iri mumatambudziko
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Zvinoparadza: Nicaragua Tourism iri mumatambudziko
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kodzero Dzevanhu • Nicaragua Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika muCentral America nyika yeNicaragua yakagumisira kushanyirwa kwenyika, nevasviki vepasi rose vachidzikira ne61% muna Kubvumbi - Chikunguru 2018.
Nicaragua, yakaiswa pakati pePacific Ocean neCaribbean Sea, inyika yeCentral America inozivikanwa nenzvimbo yayo inoshamisa yemakungwa, makomo anoputika nemabhichi. Vast Lake Managua uye iconic stratovolcano Momotombo vanogara kuchamhembe kweguta guru reManagua. Kumaodzanyemba kwaro iGranada, inozivikanwa nekuvakwa kwayo kweSpanish nekoloni uye zvitsuwa zvezvitsuwa zvinofambiswa nehupenyu hweshiri dzinopisa.
Sekureva kweshoko richangobva kuitwa neInternational American Commission on Human Rights (IACHR) huwandu hwevanhu vakafa panguva yemhirizhonga yakatambudza Nicaragua kubva muna Kubvumbi 18, inomira pa322, 21 vacho vaive mapurisa uye 23 vacho vaive vana kana vechidiki. Uye zvakare, mazana evanhu aripo ari musungwa.
Iwo makuru misika sosi yevashanyi kuCentral America neCaribbean iUSA, Canada neSpain. KuNicaragua, vese vari pasi zvakanyanya, nevanosvika kubva kuUSA vachidzika 67% kubva munaKubvumbi kusvika Chikunguru; Canada iri pasi 49% uye Spain pasi 47%.
Tourism kuHonduras, iyo inoganhurira Nicaragua kuchamhembe kwakadziva kumadokero uye kuGuatemala, iyo inoganhurana neHonduras kuchamhembe kwakadziva kumadokero vese vanoita kunge vakanganiswa nekuswedera kwavo kumatambudziko, sevasvika muHonduras vaive pasi pe5% uye kuGuatemala vaive pasi. 3% pamusoro penguva imwe chete. Costa Rica, iyo inopfuura Nicaragua kumaodzanyemba, nerombo rakanaka haina kukuvara zvakanyanya; vashanyi vayo vanosvika vakakwira 2%, vakafananidzwa vachipesana nenguva yakaenzana gore rapfuura.
Tourism ndiyo indasitiri yakakosha muNicaragua, sezvo iri iro rinokonzera zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemari inotengeswa kunze kwenyika, sekureva kweWorld Travel & Tourism Council (WTTC). Pamberi pematambudziko, WTTC yaitarisira kuti kunze kwenyika kwevashanyi veNicaragua kukura pa15% mu7.7.
Olivier Jager, CEO, ForwardKeys, akati: “Mishumo nemifananidzo ichibuda muNicaragua zvinotyisa. Kunyangwe hazvo vashanyi vasiri ivo varatidziro yemhirizhonga, zvatiri kuona izvi zvinoratidza pachena kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika mudzimba dzinowanzoisa nzvimbo yekuenda zvakaipa uye zvinokanganisa kushanya. ”
Dr. R. Kenneth Romer vakadoma Mutevedzeri Mukuru weBahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation January 24, 2022
Vanhu vekuAmerica vakayambira kuti vadzivise kufamba kuenda kuRussia izvozvi January 24, 2022
Kutsva Kwekufamba Kudzoreredza Kunotora Evolution January 24, 2022
Mufambi Mutsva: Kutsvaga Chinangwa Sezvo Nyika Ichavhurazve January 24, 2022
Minnesota inoda kuve kwauri kuenda kuNational Vacation Day January 24, 2022
Ko Maneja Wenzvimbo Yako Anofanira Kubvumidzwa? January 24, 2022
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation inogadza Latia Duncombe seActing Director General January 24, 2022
PR hutsinye: Emirates inomanikidza vashandi vayo kuti vaderedze uremu January 24, 2022
Ngarava yengarava inoramba kudzokera kuUS, inopotera kuBahamas January 24, 2022
UK kumisa bvunzo dzeCOVID-19 kune vashanyi vakabayiwa zvizere January 24, 2022
Yakanakisa gap gore rekufamba kwekuenda kutenderera pasirese kwe2022 January 24, 2022
Mitengo yetikiti yekukwezva yeUS yakakwira mumakore mashanu apfuura January 24, 2022
Ongororo: Ndivanaani 'vanonyanyofarirwa' muUK? January 24, 2022
Israel inoronga ndege huru dzechiJudha kubva kuUkraine kana Russia ikapinda January 24, 2022